အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အဓိကကြော်ငြာခြင်း - သိကောင်းစရာများ ၄ ချက် | Martech Zone
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်နေရာအနှံ့တွေ့ကြုံနေရသည်။ ယခုအချိန်သည်အချိန်ပြည့်ဖောက်သည်များဖြစ်လာရန်အလားအလာများကိုယခုခေတ်တွင်ပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲလာသည်။ ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အခကြေးငွေပေးဆောင်သောမြှင့်တင်ရေးယန္တရားများဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အသိပညာကိုမြှင့် တင်၍ ဝင်ငွေကို အသုံးပြု၍ မောင်းနှင်နိုင်သည် ဇာတိကြော်ငြာ.
၎င်းသည်အွန်လိုင်းဘုံ၌အသစ်သောအယူအဆမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်များစွာသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်၎င်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ မူလကြော်ငြာများသည်အမြတ်အစွန်းအများဆုံးမြှင့်တင်ရေးနည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်လိုချင်သောအမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်နီးပါးအာမခံသောကြောင့်သူတို့ကအမှားကြီးကြီးမားမားလုပ်နေကြသည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ ဇာတိကြော်ငြာနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြားမျှတမှုရှိအောင်သင်လုပ်နိုင်ပါသလား။ သင်ဤမေးခွန်းနှစ်ခုကိုမည်သို့ဖြေဆိုမည်ကိုသေချာမသိပါကအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ဇာတိကြော်ငြာ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများကိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စကြ ၀ universeာကိုလွှမ်းမိုးနေသည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မည်သို့ဆိုသော်ဇာတိကြော်ငြာများကောမည်သို့နည်း။ သင်အမှန်တကယ်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိလိုလျှင်၊ ၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုနားလည်ပြီးဤနယ်ပယ်ရှိအခြေခံစာရင်းများကိုစစ်ဆေးရမည်။
မူလကြော်ငြာသည်၎င်းတို့ပေါ်ထွက်လာသောမီဒီယာပုံစံ၏ကြည့်ခြင်း၊ ခံစားခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လိုက်ဖက်သောငွေပေးချေသည့်ကြော်ငြာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတိကြော်ငြာများကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာ newsfeed ၏အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဆောင်းပါးအကြံပြုချက်များအဖြစ်မကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်။
Native Advertising စာရင်းအင်းများ
Native display ads များသည် click-through နှုန်းကိုထုတ်လုပ်သည်။ 8.8 ကြိမ် ပုံမှန် display ကိုကြော်ငြာများထက်ပိုမိုမြင့်မား။
ဖောက်သည်များ၏ 70% ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းရိုးရာကြော်ငြာများထက်အကြောင်းအရာမှတဆင့်လေ့လာလိုသည်။
အသုံးပြုသူသုံးပုံနှစ်ပုံကိုရှာပါ အကြံပြုအကြောင်းအရာ ဇာတိကြော်ငြာ၏အသုံးဝင်ဆုံးပုံစံဖြစ်ရန်။
အမေရိကန်မှကြော်ငြာသူများသည်ကုန်သွားသည် $ 44 ဘီလီယံအထိ နှစ်စဉ်ဇာတိကြော်ငြာတွေပေါ်မှာ။
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် Native Advertising ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
မူလကြော်ငြာသည်အစွမ်းထက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ဇာတိကြော်ငြာ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများမှာ -
မူလကြော်ငြာများသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိပါ။ အခြားပရိုမိုပုံစံများနှင့်မတူဘဲ၊ မူလကြော်ငြာများသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိသည်။ နာမည်ကဖော်ပြသလိုပဲ၊ ဒီလိုကြော်ငြာတွေဟာသဘာဝကျပြီးအော်ဂဲနစ်ဖြစ်ပုံရတယ်၊ အဲဒါကသူတို့ကိုနဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေ၊
မူလကြော်ငြာများသည်ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သည်။ လူများသည်ဇာတိကြော်ငြာများကိုယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်မှတ်ယူလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်ကြော်ငြာများနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုအပြည့်အ ၀ ပေါင်းစပ်ထားလျှင်အံ့အားသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ပရိသတ်ကိုအမြင်ကျယ်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်အထင်ကြီးနိုင်သည်။
အဆင့်မြင့် CTR: မူလကြော်ငြာများသည်ပုံမှန်ကြော်ငြာပုံစံများထက်ပိုမိုလျင်မြန်သောကလစ်နှိပ်နှုန်း (CTR) ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ဤကြော်ငြာအမျိုးအစားသည်အလွန်တရာခက်ခဲလွန်းလှသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းအရာကိုစားသုံးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါ။
Native ads များသည်လူတိုင်းနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ဇာတိကြော်ငြာနှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်စီးပွားရေးတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူတိုင်းနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ သုံးစွဲသူများသည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ပို့စ်များကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကြေညာသူများကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကြော်ငြာသူများသည်ရည်မှန်းထားသောရလဒ်များကိုပေးသောကြောင့်ဇာတိကြော်ငြာကိုနှစ်သက်ကြသည်။
အခုဆိုရင်ဇာတိကြော်ငြာ၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များကိုသင်နားလည်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုနှင့်မည်သို့တွဲဖက်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ကျန်ရှိတော့သည်။ သင့်အတွက်လက်တွေ့ကျသောအကြံဥာဏ်လေးမျိုးစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားသည်။
ထိပ်ဖျား ၆: သင်၏စိတ်ထဲရှိပရိသတ်နှင့်အတူလုပ်ပါ
သင်၏အလုပ်သည်သင်၏မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်လင့်ချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများနှင့်ကိုက်ညီသောခေါင်းစဉ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သင်၏အလားအလာများ၏အကျိုးစီးပွားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်သည်။
Jake Gardner တစ်ခု assignment provider ပါ at ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရေးအသားန်ဆောင်မှုစားသုံးသူတစ် ဦး သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့စဉ်းစားသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် -“ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြtheနာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့လူတွေကစာဖတ်ခြင်းအပေါ်အရေးယူဖို့အားပေးတဲ့အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြန့်ချီရေးလမ်းကြောင်းများကိုသင်စဉ်းစားသင့်သည်။ လူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်ကြော်ငြာများကိုဖော်ပြချင်ပါသလားသို့မဟုတ်အကြံပြုထားသောစာမျက်နှာများနှင့်အတူသွားလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံချက်သည်သင်သိထားသောရုပ်သံလိုင်းကိုအထူးသဖြင့်သင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်ထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထိပ်ဖျား ၆: standout ကော်ပီများကိုဖန်တီးပါ
ပထမ ဦး စွာအကြောင်းအရာသည်အလွန်မြင့်မားသောသတင်းအချက်အလက်၊ ပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဇာတိကြော်ငြာများသည်ဘက်မလိုက်ဘဲဘက်လိုက်မှုမရှိဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အချက်မှာအချက်အလက်အခြေပြုကောက်ချက်ချမှုများနှင့်သင်၏ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ရေးသားချက်များသည်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါပိုင်းအရပြည့်စုံကောင်းမွန်ရမည်။ အမှားတစ်ခုတည်းကသင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်၊ သို့မှသာအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီကိုတိုက်ရိုက်မသွားမီနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ proofreading သည်သင်၏အရာမဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အထူးတိုက်တွန်းပါသည် Grammarly or Hemingway.
ထိပ်ဖျား ၆: တစ် ဦး ဆင်းသက်စာမျက်နှာပိုကောင်းအောင်
ဇာတိကြော်ငြာအားလုံး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများကိုသက်ဆိုင်ရာမြေပေါ်စာမျက်နှာသို့ပြန်ပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ၊ သင်စတင်နေတဲ့စာမျက်နှာဟာသင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့သတင်းစကားနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏အကောင်းဆုံးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာတူညီသောပုံစံနှင့်စာရိုက်ခြင်းကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆင်းသက်စာမျက်နှာသင့်ရဲ့အလားအလာများအကြောင်းကိုဖတ်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ရန်ခေါ်ဆိုမှု (CTA) ပါရမည်။ ကောင်းမွန်စွာနေရာချထားသော CTA ခလုတ်သည် visitors ည့်သည်များအားနောက်ထပ်လမ်းညွှန်များကိုပေးပြီးဆင်းသက်ရာတွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပြသည်။
ထိပ်ဖျား ၆: တိုးတက်စေရန်တိုင်းတာ
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်း၏နောက်ဆုံးအဆုံးမှာသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုးတက်စေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သောသင်၏မိခင်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာ၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်မှန်ကန်သောပန်းတိုင်များကိုချမှတ်ပြီးအဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများ (KPI) ကိုဆုံးဖြတ်ပါကဤအလုပ်သည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကြော်ငြာရှင်များသည်မြင်ကွင်းနှင့်ကလစ်နှစ်ချက် - အချက်နှစ်ချက်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ KPIs နှစ်ခုသည်အမှန်ပင်သိသာထင်ရှားသော်လည်းသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည့်တတိယအချက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသောသော့ချက် parameter သည်, Post-click ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏သြဇာအရှိဆုံးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတရားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒစ်ဂျစ်တယ်နေတွင်သင်၏နေရာကိုယှဉ်ပြိုင်သူအမြောက်အများနှင့်အတူနေရာရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ ဤသည်မှာဒေသခံကြော်ငြာများသည်သုံးစွဲသူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ဤစာမူ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတိကြော်ငြာ၏အယူအဆကိုရှင်းပြပြီး၎င်းကိုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာပေါင်းစပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းလေးခုကိုပြသခဲ့သည်။ ပိုကောင်းသောဇာတိကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဤအကြံပြုချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုသင်အသုံးပြုသင့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှအကြံပြုချက်များပိုမိုလိုအပ်ပါကမှတ်ချက်ရေးရန်သေချာစေပါ - ကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုရန် ၀ မ်းသာပါသည်။
အဲလစ်ဂျုံးစ်သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်အကောင်းဆုံးအတွက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးသားနေခြင်းဖြစ်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်စတင် နှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအေဂျင်စီများ။ Alice သည်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်၏အမေဖြစ်ပြီးအသည်းအသန်ယောဂလေ့ကျင့်သူဖြစ်သည်။